Gbasara Anyị | Jiande Welfine Import & Export Co., Ltd.
Ihe mbụ JIANDE SINFINE POWDER METALLURGY Factory. Emi odude ke aku na uba mepụtara HangZhou Jiande obodo, guzosie ike na 2001, Welfinehas a onwe-wuru omumuihe nke 5000 square mita, kwa afọ mmepụta ikike nke 500 tọn.
Anyị bụ ọkachamara na ngwongwo ntụ ntụ na afọ 17 nwere ezigbo otuto ọha na eze, ọnụ ọgụgụ na iguzosi ike n'ezi ihe n'ọhịa a. Enweela ọtụtụ puku ngwaahịa, mbupụ na Japan, Denmarks, Netherlands na USA, wdg.
Anyị nwere ndị ọrụ nyocha anyị na ndị ọrụ mmepe. All ọhụrụ ngwaahịa nwere ike oru nkwado n'azụ ha.
Nka na ụzụ ngalaba nke ẹdude agadi injinia, technicians, àgwà inspectors 'agadi oru ndụmọdụ, anyị na-eje ozi dị iche iche ọrụ na a ijeụkwụ nke na-amị ọtụtụ ihe ọhụrụ kwa ụbọchị.
Na igwe akụrụngwa nke aka anyị, igwe akụrụngwa akpaka, igwe ọkụ ọkụ, igwe EDM dị elu, Lathe，agbaze ọla kọpa，Ngwongwo CNC Maching, igwe nri wdg.
Ngwaahịa ndị na-akwado ya: biarin onwe ya, sintered gear，ndị ọzọ n'ibu Ọdịdị akụkụ & ígwè isi ọla kọpa alloy bushing, ígwè mgbatị ọla kọpa olu akwa, ígwè ọla kọpa mejupụtara bushing, ndu set nke billet.
Anyị nwere igwe nyocha zuru oke: igwe nyocha ụwa, igwe nyocha tensile, akụrụngwa ekweghị ekwe, akụrụngwa njupụta, metalloscope, ngwa onyonyo onyonyo, spectrograph，wdg.
ISO9001: 2000 usoro njikwa njikwa nke IQNet na CQC kwadoro.
Ntinye onwe onye na-etinye onwe ya nke Wel dị mma nwere ogologo oge kwekọrọ n'ụkpụrụ mba nke kemịkal na nke anụ ahụ, dịka ASTM, JIS, DIN, MPIF, SAE, GB…